Izinganekwane ZaseGalicia: Izinganekwane zomhlaba omuhle | Izindaba Zokuhamba
Luis Martinez | | Spain amadolobha, Cultura, España
Izinganekwane zaseGalicia ziphendula ubuhlakani bensimu enamakhulu eminyaka yomlando. Isimo sezulu saso esimnyama nesinemvula, ugu lwaso olumangelengele nezigodi zalo ezijulile ezinezihlahla nakho kuzinikeza ngokumangalisayo ekubonakaleni kwezinganekwane nezinsizi.
Ngakho-ke, akuyona ngengozi ukuthi iGalicia yindawo egcwele izindaba ezidumile. Ezinye zinezimpande zesikhathi futhi, ngokumangazayo, zihlobene nezindaba ezifanayo ezizalwe enkabeni nasenyakatho yeYurophu. Abanye, ngakolunye uhlangothi, ngabomdabu beqiniso futhi baphendula kwabamsulwa izinganekwane zokhokho. Uma uthanda umhlaba wasenganekwaneni, sikumema ukuthi uqhubeke nokufunda, njengoba sizokutshela ngezinye zezinganekwane ezikhethekile nezidume kakhulu zaseGalicia.
1 Izinganekwane zaseGalicia: Ifa lomlomo elingavamile
1.1 Inkampani Engcwele
1.2 ICosta da Morte, umthombo wezinganekwane
1.3 Umbhoshongo waseHercules
1.4 Umqhele womlilo, umlando ononya wasendulo
1.5 Isonto laseSanta María de Castrelos kanye nenganekwane yensimbi
1.6 ISan Andrés de Teixido
1.7 Umgede weNkosi uCintolo
Izinganekwane zaseGalicia: Ifa lomlomo elingavamile
Izinganekwane eziningi zaseGalicia ezisasinda kuze kube yilolu suku zime isikhathi eside ngenxa yokungajwayelekile isiko lomlomo yalelo zwe. Ngoba eziningi zivela emasikweni athandwayo adluliselwa ezizukulwaneni ngezizukulwane ngezindaba ezixoxwa ngobusuku obubandayo phansi komlilo. Kepha, ngaphandle kokuqhubeka nokwenza okuthile, sizokutshela ngamanye ala izinganekwane.
Mhlawumbe yilokhu, ngasikhathi sinye, inganekwane ethandwa kakhulu yeGalicia futhi okuphindaphindwe kakhulu kuwo wonke amazwekazi amahlanu. Ngokubanzi, ithi udwendwe lwabafileyo ludabula emazweni aseGalician ebusuku ukuxwayisa ngokufa okuzayo. Phambi kodwendwe olwesabekayo olunjalo kubizwa i-spectrum enkulu Isiteji futhi noma ngubani oyibonayo kufanele ayilandele ngothi lwesibani kanye nembiza.
Njengoba sikutshelile ngaphambili, le nganekwane inama-correlates ayo kwezinye izingxenye zeYurophu. Isibonelo, ixhunywe ku- Ukuzingela Kwasendle o Mesnie hellequin emazweni aseJalimane. Kepha akudingeki sihambe ibanga elide kangako. Izinganekwane ezifanayo zitholakala kwamanye ama-peninsular mythologies. Njengesibonelo, singasho ukuthi UGüestia e-Asturias, i Ukwesaba eCastile nase iCorteju e-Extremadura nakwezinye izindaba ezindaweni ezahlukene.
Ngakolunye uhlangothi, njenganoma iyiphi inganekwane enhle ethusayo ebiza usawoti wayo, lena nayo inezindlela zayo zokulwa nemiphumela yokubona iSanta Compaña. Phakathi kwabo, yakha isiphambano ngandlela thile, dweba isiyingi phansi bese ungena ngaphakathi ngenkathi udlula noma ungene esinyathelweni somkhumbi wokuhamba ngesikebhe.
ICosta da Morte, umthombo wezinganekwane
ICosta da Morte
Njengoba wazi, engxenyeni esenyakatho-ntshonalanga yeGalicia yiyona ICosta da Morte ICosta de la Muerte, insimu egama layo selivele lizibophezela ekubeni khona kwezinganekwane. Owokuqala wabo ubuyela emuva ezikhathini zamaRoma, ngoba babecabanga ukuthi umaka lo finis terrae, okungukuthi, ukuphela komhlaba.
Lapho ulwandle lwaqala futhi, ngokwenkolelo yamaRoma, labo abangena kulo bagwinywa, kungaba ngamanzi uqobo, noma izidalwa ezimbi. Phambi kwabo, amaCelt ayekhulekela ilanga kulawo mazwe.
Kepha iqiniso ukuthi ubudlova balezo zingqimba namandla e-Atlantic edlangile kubangele abaningi ukuphuka komkhumbi. Futhi lena enye indawo ephelele yokuzalela izinganekwane. Phakathi kwazo, leyo yamadolobha asenganekwaneni ase-Antiquity ayengcwatshwe ngamanzi, lawo amatshe ayisimangaliso noma lawo osanta abaphulukisa meigallo (iso elibi).
Yiyona kuphela indlu yesibani evela ezikhathini zamaRoma esele imile. Ngakho-ke, ineminyaka eyizinkulungwane ezimbili yomlando. Njengoba uzoqonda, kunengqondo ukuthi izinganekwane eziningi nezindaba ezinganekwane ziye zathuthukisa ezungeze umbhoshongo.
Okuthandwa kakhulu ukuthi abahlali base UBrigantium noma uBreogan babehlala ngokwesaba isigebenga UGeryon, abafuna zonke izinhlobo zenkokhiso kubo, kufaka phakathi izingane zabo. Babhekene nokungakwazi ukwehlula yena, bacela usizo ku Hercules, owamphonsela inselelo yokulwa futhi wamhlula ngemuva kokuxabana kwegazi.
Ngemuva kwalokho iqhawe lamngcwaba uGeryon futhi, phezu kwethuna lakhe, laphakamisa umbhoshongo owawuwuthwesa ithoshi. Kusondele kakhulu, ngaphezu kwalokho, wadala idolobha futhi, njengoba kwabizwa owesifazane wokuqala owafika kulo UCruña, UHercules waqamba lo muzi omusha ngegama La Coruña.
Enye inganekwane ngombhoshongo waseHercules ithi endaweni lapho i- Umbhoshongo waseBreogán. Lokhu bekungaba yinkosi edumile yaseGalician evela ku izinganekwane zase-irish, ikakhulukazi kufayela le- U-Lebor Gábála Érenn o Incwadi Yokunqotshwa Yase-Ireland.
Ngokomlando, uBreogán ngabe wawukhulisa lo mbhoshongo futhi, phezulu kwawo, izingane zakhe zazibona umhlaba oluhlaza. Befisa ukumhlangabeza, bagibela bafika Ireland. Eqinisweni, phansi koMbhoshongo WaseHercules ungabona namuhla umfanekiso onikezelwe enkosini eyinganekwane, omunye wabantu abakhulu bezinganekwane zaseGalician.
Umqhele womlilo, umlando ononya wasendulo
Inqaba yaseMonforte de Lemos
UMonforte de Lemos ingenye yamadolobha amakhulu kakhulu eGalicia. Enye yezinganekwane zayo ithi ngqo phakathi kwe- inqaba wedolobha kanye ne- Isigodlo saseBenedictine saseSan Vicente del Pino kwakukhona umgudu ongasese womshoshaphansi.
Esinye sezikhathi lapho Ukubalwa kwamaLemos Wayengekho esigodlweni ukufeza okuthile ukuthunywa yinkosi, umbusi wesigodlo wasebenzisa ithuba lokuvakashela indodakazi yasebukhosini, ayeseqale ukuthandana nayo.
Lapho ibuya, indoda yaseLemos yathola lokho futhi yamema umpristi ukuthi azodla. Kodwa ngesikhathi se-dessert, esikhundleni salokhu, wamnika umqhele wensimbi obomvu, wawufaka ekhanda lakhe, wase efa. Namanje, eduze kwendlela yokubhapathiza yesonto lezindela, ungabona ithuna lika-abbot oyishwa, ogama lakhe lalingu UDiego Garcia.
Isonto laseSanta María de Castrelos kanye nenganekwane yensimbi
ISonto LaseSanta María de Castrelos
Inganekwane ithi edolobheni laseVigo lase UCastrelos waphila umkhandi wensimbi ukuthi ngangithandana kakhulu intokazi. Wayesevele esemdala futhi kwakungokokuqala ukuthi kwenzeke kuye. Wanquma lapho-ke ukumnika itshe eliyigugu, kepha intombazane yalenqaba.
Njengoba ukwahlulela kwakhe kulahlekile, wakhetha ukumthumba futhi wamvalela ku-smithy yakhe. Kodwa-ke, le ntokazi yamcela ukuthi ayidedele iye esontweni nsuku zonke. Njengoba isonto laliphambi kwendawo yokusebenzela yakhe, le ndoda yamukela.
Nokho, i-meiga uvakashele umkhandi wensimbi eyomemezela ukuthi uzoshona kungekudala nokuthi othandekayo wakhe uzoshada nenye indoda emncane kakhulu kunaye. Ephuphuthekiswe yintukuthelo, wathatha insimbi eshisayo waya esontweni eyokhubaza ubuso bentombazane. Noma kunjalo, UNkulunkulu ubenezinye izinhlelo. Ngokushesha, wavimba umnyango wokungena ethempelini ukuze awuvikele. Usengabona ubuciko obungaseningizimu besonto namuhla nge umnyango wezitini.
ISan Andrés de Teixido
ISonto LaseSan Andrés de Teixido
Lesi sifunda esincane esisedolobheni laseCoruña Cedeira Ine-hermitage okuyiyona nto yokuhambela. Phakathi kwabomdabu bendawo lesi sisho siyathandwa «To San Andrés de Teixido it goes de morto noma that non foi de vivo» futhi iphendula inganekwane enelukuluku.
Kusho lokho ISan Andrés Nganginomona Santiago, eyayivele iyinto yokuhambela. Wenze isikhalazo sakhe ku UNkulunkulu, owayethintwa ukudabuka kwakhe. Ngakho-ke wamthembisa ukuthi bonke abantu abafayo bazoya odwendweni oluya endlini yakhe engcwele nokuthi, noma ngubani ongaphili, uzokwenza lokho ngemuva kokufa kwakhe, aphinde azalwe abe yisilwane.
Okuhlukile kwale nganekwane kuthi iSan Andrés yaphukelwa umkhumbi nesikebhe sakhe kulawa mazwe nokuthi umkhumbi waphendulwa waba ngamatshe namuhla akha isiqhingi esincane ogwini oluhle kakhulu lwaseCedeira. Ukuphuka komkhumbi okwashaqisa kakhulu ukuthi uNkulunkulu wathembisa usanta ukuthi uzovakashelwa yibo bonke abantu abafayo.
Umgede weNkosi uCintolo
Sizoqedela uhambo lwethu ngezinganekwane zaseGalicia ngalena efaka amakhosi anomusa, amakhosazana amancane, abathakathi ababi abenza imilingo emibi nabafana ngothando.
ICave Cintolo Cave yiyona enkulu kunazo zonke eGalicia, enamamitha angaphezu kuka-6 500 ubude. Kugcwele UMariña Lucense, ikakhulukazi esifundeni sase Okuhle. Ngokomlando, ezikhathini zasendulo, le ndawo yayichuma umbuso waseBría kabani inkosi yakhe IBhande.
Ngaleso sikhathi, wayenendodakazi enhle egama layo Xila owayethandana kakhulu nale nsizwa Uxío, owayehambisana naye. Yize wayengahloniphekile, umshado phakathi kwalaba ababili wawusuvele uvunyelwene lapho umthakathi onamandla UManilan Usabise inkosi ngokuthi izodala umlingo oyoqeda umbuso wayo uma ingamnikeli uXila abe ngumkakhe.
Kodwa u-Uxío wayengazimisele ukuyivumela futhi wabulala umthakathi. Kodwa-ke, wayesesilungisile isipelingi sakhe futhi, lapho isithandwa esinesibindi sibuyela eBría, sase sivele sanyamalala. Endaweni lapho ayekade ekhona, wathola kuphela umlomo womhume. Ephelelwe yithemba, wangena kulo efuna isithandwa sakhe wangabe esaphuma futhi.
Sengiphetha, sikutshele ezinye ze- izinganekwane zaseGalicia Okuthandwa kakhulu. Kepha kunabanye abaningi esizobashiya, mhlawumbe, senzelwe enye i-athikili. Phakathi kwabo, lokho kwe isisekelo sePontevedra, lokho kwe ukukhweza i-paralaia, lokho kwe isimangaliso samaBouza noma lokho kwe Intaba iPindo. Konke okuzungeze iGalicia kungumlingo futhi kuyajabulisa, ngakho-ke uma ukwazi, ungaphuthelwa ithuba lokubalekela kwezinye zezindawo esesizishilo futhi ujabulele ubuhle be ezokuvakasha zasemakhaya endaweni.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » Ukuphunyuka eYurophu » España » Izinganekwane zeGalicia
Ama-movie okufanele uwabuke ngaphambi kokuya eParis
Imishanguzo yokuhambela eBrazil